Igumbi eliphindwe kabini kwihlathi laseKampinos
Julinek, mazowieckie, Poland
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguZjednoczone Przedsiębiorstwa
Indawo yokulala kunye nesidlo sakusasa iJulinek Park ifumaneka entliziyweni yehlathi laseKampinos, kufuphi neendlela ze-S7 kunye ne-A2, evumela ukufikelela lula ukusuka eWarsaw, eModlin naseSochaczew.
Ukuzola kunye nekhava eluhlaza yehlathi kukulungele ukuphumla. Ngaloo ndlela, iJulinek yindawo efanelekileyo yokuhlala yeentsapho ezinabantwana, abahambi bezoshishino, amaqela ahleliweyo kunye nabakhenkethi ngabanye.
I-B&B Julinek Park ineebhedi ezili-140 kumagumbi angatshatanga, aphindwe kabini namathathu, kunye namagumbi ale mihla. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala elineshawa, iTV enescreen esicaba kunye newodrophu. Amagumbi ahlaziywa ngokupheleleyo kwi-2018 kwaye ivumba elitsha. Kukho i-wi-fi yasimahla efumanekayo kwizakhiwo zehotele, kwaye kukho indawo yokupaka iimoto simahla ecaleni kwehotele. Iindwendwe zingasebenzisa izibonelelo zebarbecue kunye neziko.
B&B Julinek Park jest zlokalizowany przy jednym z największych w Polsce Parku Rozrywki Julinek dla dzieci, z parkiem linowym, polem do minigolfa, samochodami elektrycznymi i wieloma innymi atrakcjami. Park rozrywki od otwarcia w maju 2015 odwiedziło już ponad 100 000 osób! Szereg atrakcji zapewnia całodzienną rozrywkę dla całej rodziny!
Nceda uqhagamshelane nathi ngomnxeba: +48 22 611 61 16
Ukuzola kunye nekhava eluhlaza yehlathi kukulungele ukuphumla. Ngaloo ndlela, iJulinek yindawo efanelekileyo yokuhlala yeentsapho ezinabantwana, abahambi bezoshishino, amaqela ahleliweyo kunye nabakhenkethi ngabany…
4.43 ·Izimvo eziyi-7
4.43 (iingxelo zokuhlola 7)
Julinek 1, 05-084 Julinek, Poland
Kwabathanda ukuzonwabisa okusebenzayo, kubalulekile ukwazi ukuba ukusuka eJulinek kukho iindlela ezinesihloko, iindlela zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisikile kwihlathi laseKampinos. Ngokuthe ngqo ukusuka kwirenti yebhayisikile yehotele, unokuhamba uhambo kunye neendlela zehlathi zehlathi, ezifikeleleka ngesango elilungiselelwe ngokukhethekileyo elivulekileyo ngeeyure zePaki yokuzonwabisa.
IJulinek yindawo entle apho unokuchitha neentsuku ezimbalwa ngaphandle kokukruquka. I-landscape enhle kunye namandla okukhangayo kuya kunika umtyeleli ngamnye into eninzi yemibono kwaye ikuvumela ukuba uthathe ikhefu kugqatso lwemihla ngemihla.
Umbuki zindwendwe ngu- Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya:
iph.: +48 22 611 61 16